Siyaabaha La Cadeeyay ee Faa'iidooyinkaaga Ganacsi Yaryar uga heleen Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Khamiis, Juun 11, 2015 Khamiis, Juun 11, 2015 Douglas Karr
Waad la yaabi lahayd, kadib dhammaan kiisaska daraasadda iyo caddaynta, weli waxaa jira naysayers halkaas oo adduunka ganacsiga yar yar oo aaminsan in warbaahinta bulshada ay tahay waqti lumis. Ha igu qaldan… waxay noqon kartaa waqti lumis. Haddii aad waqtigaaga ku bixineysid daawashada iyo dhajinta fiidiyowyada bisadaha, waxaa laga yaabaa inaadan ganacsi aad u badan heli doonin.
Waan hubaa markay ganacsiyada ugu horreeya helaan taleefannada, hoggaamiyeyaashu waxay ka walaacsanaayeen in shaqaaluhu ay la sheekaysan doonaan saaxiibbadood maalinta oo dhan, sidoo kale. Laakiin hadda cidina su'aal kama gelin muhiimadda ay leedahay awood u lahaanshaha inay ku xirmaan ganacsi taleefanka - labadaba dibedda ama soo galid. Warbaahinta bulshada wax kale kama duwana… waa warbaahin isgaarsiineed oo ku tiirsan istiraatiijiyadda shirkaddaadu ay u adeegsanayso dejinta.
Haddii aad ku biirto kooxaha, la wadaagto mowduucyada qiimaha, isku xirnaanta iyo raacitaanka saamileyaasha, ka caawi dadka dhibaatooyinka, dhiirrigelinta waxyaabaha waaweyn ee adiga kuu gaarka ah, ka taxaddar oo aad la wadaagto waxyaabo waaweyn dadka kale, waxaad kobcin kartaa shabakad cajiib ah oo bixin karta sannado dakhli ah.
Dhibaatadu si kastaba ha noqotee kuma xirna haysashada joogitaanka warbaahinta bulshada laakiin sida ay ganacsiyadaani u dhigaan warbaahinta bulshada si wanaagsan. Marka laga eego aragtida ganacsiga yar yar, suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa ka badan uun helitaanka waxyaabaha la jecel yahay, taageerayaasha, dib u celinta iyo dib-u-celinta, laakiin halkii laga heli lahaa faa'iidooyinka sare ee soo socda, iyo in ka badan, taas oo saameyn weyn ku yeelan doonta ganacsiga. Jomer Gregorio, Suuq-geynta Dijital ah ee CJG.
8 Dariiqo oo Suuqgeynta Baraha Bulshadu uga Faa’iidaysato Ganacsiyada Yaryar
Kordhinta taraafikada degellada.
Waxay dhalisaa hogaaminta kharashyada ugu yar.
Waxay xoojisaa suuqgeynta waxyaabaha.
Waxay kordhisaa wacyi gelinta sumadda.
Wuxuu ku siinayaa aragti dhegeysteyaal weyn.
Waxay hagaajinaysaa daacadnimada sumadda.
Waa wax xiiso leh in CJG uu adeegsaday ereyga brand oo dhan infographic ah. In kasta oo ay jiraan xog badan oo lagu taageerayo faa'iidooyinka guud ee warbaahinta bulshada ee nooc, waxaan ku doodi lahaa inay saameyntaadu leedahay adiga dadka waa ka sii ballaadhan yahay. Baraha bulshada ma ahan wax soo saar ama adeeg kaala hadlaya ganacsi yar, ee waa dadka ganacsatada yar yar!
Dadku waxay siiyaan fursad kalsooni iyo kaqeybgal aan astaantaadu bixinayn. Dadku way ku baran karaan, ku aamini karaan, su'aalona ku weydiin karaan, ugu dambaynna way kaa iibsan karaan. Astaantaadu waxay ka faa'iideysaneysaa tan oo dhan, dabcan… laakiin dadkaaga dartii. Waxay udub dhexaad u tahay, waa bulshada warbaahinta, ma aha oo kaliya hal-dhinac dhexdhexaad ah.
Tags: Suuqgeynta Dijital CJGhubsashoinfographicganacsiga yaryarfaa'iidooyinka warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada ee infographic
Saadaalinta: Ganacsigaagu Wuxuu Noqon Doonaa Ganacsi E-commerce ah